Ugu yaraan '84 qof oo lagu dilay' duqeyn Mareykanka uu ka fuliyay Suuriya - BBC News Somali
Ugu yaraan '84 qof oo lagu dilay' duqeyn Mareykanka uu ka fuliyay Suuriya
Lahaanshaha sawirka Ole Solvang/Human Rights Watch
Image caption Goobjoogayaal ayaa hay'adda u sheegay in suuqa Tabqa uu ahaa meel shacab
Laba duqeyn oo bishii Maarso ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee Isbeheysiga uu Mareykanka hogaaminayo, waxaa ku dhintay 84 qof, sida ay sheegtay hay'adda Human Rights Watch.
Baaritaan ayaa lagu ogaaday in tobannaan caruur ah ay ka mid ahaayeen dadka ku dhintay duqeynta lagu qaaday iskuul iyo suuq ku yaalla Tabqa oo ah Galbeedka Raqa.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in xubno ka mid ah kooxda la baxday dowladda Islaamka ay ku sugnaayeen goobaha la duqeeyay, rayidkana ay gabaad ka dhigteen.
Isbeheysiga wuxuu aaminsan yahay in qof shacab ah uusan ku dhiman duqeyntii Mansuura ee Suuriya.
Waxay ku adkeysanayaan in ay u hogaansan yihiin shuruucda caalamiga ah, ayna ka fogaadeen in duqeynta ay dhibaato ka soo gaarto dadka aan hubeysnayn.
Horraantii bishan, Isbeheysiga dagaalka kula jira ururka la baxay dowladda Islaamka, wuxuu sheegay in diyaaradohooda dagaalka ay si aan ula kac ahayn u dileen 685 qof oo ku kala noolaa dalalka Suuriya iyo Ciraaq, tan iyo bishii August ee 2014-kii.
Sikastaba, hay'adda Airwars oo la socoto eedaha ku saabsan in shacab ku dhinta dagaallada ayaa sheegtay in dadka la dilay ay gaarayaan illaa 5,343 qof.
Warbixin la daabacay Isniintii, Hay'adda u dooda Xuquuqda Addanaha waxay ku sheegtay in ay baaritaan ku sameysay dhowr duqeyn oo ka dhacay Suuriya.
Image caption Iskuulka Badiica ee Mansuura duqeynta ayaa burburisay
Baaritaanka waxay sameysay ka dib markii loo ogolaaday in horraantii July ay booqato Woqooyiga Suuriya, qeybaha ay maamulaan isbeheysiga SDF ee Mareykanku taageerayo.
Laba ka mid ah dhacdooyiinkii ugu dhimasho badnaa waxay dheceen xilligii ciidamada SDF ay ku sii dhowaanayeen magaalada Raqa.
Diyaaradaha isbeheysiga ayaa duqeeyay Iskuul lagu magacaabo Badiica oo ku yaalla Mansuura 20-kii Maarso, iyo suuq ku yaalla Tabqa, 22-kii Maarso.
Lix iyo toban qof oo badbaaday duqeynta oo hadda ar marqaati ayaa HRW u sheegay in iskuulka Mansuura uu hoy u ahaa barakacayaal.
Sidoo kale waxay sheegeen in suuqa Tabqa uu ahaa mid ay rayid keli ah ka shaqeysan jireen.
Dadka dhintay badankooda waxay feel-dheer ugu jireen in ay rooti ka iibsadaan foorno ku taallay suuqa, sida ay marqaatida u sheegeen hay'adda.
"Haddii ciidamada isbeheysiga aysan ogeyn in goobahaas ay shacab ku sugnaayeen, waa in ay waqti ku bixiyaan sidii ay u ogaan lahaayeen, sirdoon wanaagsan oo xaqiijin kara bartilmaameedka, sababtoo ah way caddahay in aan tallaabo wanaagsan la qaadin," ayuu yiri Ole Solvang, oo ah ku xigeenka madaxa arrimaha degdegga ah ee HRW.
Qaraxyo ka dhacay caasimadda Suuriya
Muuqaal Daawo: Xasuuqii Suuriya
Mucaaridka Suuriya oo weerar qaaday
Mucaaradka Suuriya oo soo bandhigay qorshaha xallinta colaadda